Halls Head Haven - igumbi lokuphumla
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDebbie
Ilungele iintsapho ezi-2 okanye ezi-3, okanye impelaveki ekude yamantombazana, kwindlu enamagumbi anendawo eninzi ukuya kutsho kwi-12.
Kufuphi elunxwemeni okanye emanzini kumacala amathathu - 500m ukuhamba ngokulula. Ikhefi kunye nentlanzi kunye neetships ezikufutshane.
Iindawo ezimangalisayo zokonwabisa zangaphandle ezinombono wamanzi.
Ubuncinci i-12 yayo yonke into ibonelelwe yiza nje kwaye uphumle.
Isilwanyana esinobuhlobo kodwa akukho zilwanyana kwifanitshala.
Izinyuko zezulu! Nceda uqiniseke ukuba ufunda kwaye ujonge iifoto zezinyuko ezijikeleze ipropathi.
Indlu ibekwe phezulu endulini kwiNtloko yeeHolo ezintle, ezolileyo. Imibono kwi-bay kunye nakwi-suburb. Umzuzwana sabona indlu, abantwana bethu abathathu bonke bathi ibakhumbuza indlu evela kwifilimu ethi Mamma Mia kwaye basibongoza ukuba siyithenge. Ngeegeranium ezibomvu kunye nemithi yomnquma kunye nobuninzi beblue namhlophe, siye savumelana nabo kwaye siyawamkela loo mtsalane ngotshintsho esilwenzayo. Ngaphakathi, uya kudibana nemibala eyahlukeneyo yokuphumla okuluhlaza okwesibhakabhaka, iinkuni kunye nezitshixo ezimhlophe zezityalo kulo lonke.
Ithuba elihle lokusebenza imisipha yakho yomlenze kunye nezitebhisi ezininzi ngoko akufanelekanga abo banemiba yokuhamba. Amasango okhuseleko abonelelwa abantwana.
Ilungele iintsapho ezimbini okanye ezintathu ezifuna iholide kunye. Okanye ... kwimpelaveki yamantombazana kunye neebhedi ezininzi kunye neendawo ezinokuthula zokuphumla kunye nokuvuselela! Iipakethi zokwamkela ezenzelwe wena zibandakanyiwe kubhukisho ngalunye... undazise ukuba uluhlobo luni lweqela.
Iindawo ezintathu ezahlukeneyo zokuzonwabisa zangaphandle, zonke zisasaza iziqithi zaseGrisi, zijikelezwe yimithi yomnquma. Ininzi indawo yomntu wonke kunye nezinto eziluncedo ziquka i-12+ yayo yonke into. Izitulo zangaphandle ezili-16 kunye ne-12 zangaphakathi. Yiza uzonwabele 'i-Southern Santorini' yethu!
Ukuba ufuna indawo yeofisi echongiweyo, nceda usazise njengoko sinegumbi elincinci le studio esinokuthi sikwenzele lona.
iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Indawo entle, ezolileyo kwindawo endala yeNtloko yeeHolo. Amakhaya asele eqinile, athule kakhulu kwaye kulula ukuhamba ukuya elunxwemeni lolwandle, indawo ezolileyo kunye neendawo zokukhwela isikhephe. Ikhefi kunye nentlanzi kunye nevenkile yetships ekufutshane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Halls Head